Isis Lakes 67, Wren Lodge - I-Airbnb
SOUTH CERNEY, Isis & Windrush Lakes, United Kingdom
Ummeli osekelwe ekuhlaleni
Wamkelekile udibana kwaye uyabulisa ekhoyo
• Indawo yokulala ejonge emazantsi echibini
• 3 x amagumbi okulala & 2 x amagumbi okuhlambela
• 2 x kabini & 1 x igumbi elinye/amawele
• I-Wi-Fi ibandakanyiwe
• Uxolo, izilwanyana zasekhaya azivumelekanga
• Uxolo, akutshaywa endlini
• Ilinen, iitawuli kunye nezinto ezisetyenziswayo zibandakanyiwe
• Ukuloba kwiindawo ezichongiweyo kuphela
• £200 idiphozithi yokhuseleko ebuyiselwayo iyafuneka
Indawo yokuhlala / yokutyela
• Iyunithi yekona yesitulo esi-1 x 4 kunye nesitulo sengalo esi-1 x
• 42” TV enomboniso wasimahla
• Umdlali wedvd
• Itafile enezihlalo zaba-6
• Idekhi yengcango ukuya emazantsi ijonge kumgangatho welanga
• Idekhi yelanga ejonge emazantsi
• Umphambili wechibi othe ngqo, uvalwe ngokupheleleyo
• 2 x iindawo zokuhlala elangeni
• Isicwangciso esivulelekileyo, sangoku, sixhotyiswe kakuhle
• I-oveni enye kunye negriza
• Isangqa esine isitovu seceramic
• Iwasha isomisi
• Isitya kunye neWC
• 5’ Ibhedi ephindwe kabini
• Ugcino oluninzi
• Iimbono zeChibi
• 4’ 6” ibhedi ephindwe kabini
• Ugcino olulinganiselweyo
• 3’ single with 3’ khupha ibhedi
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide
• Iinkundla ezintathu zentenetya (1 floodlit)
• Indawo yokudlala yabantwana.
• Amachibi amabini okuloba (arhabaxa & bhabha)
• Ingca yeCroquet
• IiBoules piste
• Itafile yethenini
• Igumbi lemidlalo elinetafile yokubhukuda kunye noomatshini bemidlalo
• Iinethi zokuziqhelanisa neqakamba negalufa
• Inqaku lebhola ekhatywayo
• Umnatha webhola yevoli
• Kufuphi neCirencester kwaye ikulungele ukujonga iCotswolds
• Iikhonkco zezothutho ezilungileyo (malunga neeyure ezi-1.5 ukusuka eNtshona London)
Izixhobo zokuqesha iibhedi kunye nezitulo eziphezulu ezifumanekayo (iintlawulo ziyasebenza)
Iindlwana zeholide ezisecaleni kwechibi eziseNew England e-Isis naseWindrush zibekwe kufutshane namachibi amathathu endalo, aphethwe ziingcongolo, abekwe ngaphakathi kweCotswold Water Park. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide inobubele kusapho, inobubele kwizilwanyana zasekhaya, ipaki yeholide enegadi ezihonjiswe kakuhle kakhulu kunye nokhetho olubanzi lwemisebenzi yosapho lonke. I-New England charm kunye ne-Cotswold setting inika iholide entle yaseBritani kunye nedash yesitayela saseMelika.
Ezi zindlu zitofotofo, ezisecaleni kwechibi zeholide ziza kumagumbi okulala amathathu okanye amane, kunye neepropathi ezininzi ezibonelela ngesicwangciso esivulekileyo sokuhlala esivulekela kweyakho indawo yabucala, echibini le-sundeck. Igumbi ngalinye lokulala elikhulu linefestile yemifanekiso ephindwe kabini eneembono ezintle kwelinye lamachibi amathathu okanye iigadi.
I-Isis kunye ne-Windrush Lake inikeza uluhlu olubanzi lwemisebenzi. Khetha kwiinkundla zentenetya, indawo yokudlala yabantwana, ibhola ekhatywayo, iikroti, i-la boules, intenetya yetafile, iqakamba kunye negumbi lemidlalo. I-Isis Lake ikwabonelela ngokulotywa kwe-carp kunye ne-trout, kwaye ukuhamba ngesikhephe kuvunyelwe kwi-Windrush Lake. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ikumgama wokuhamba welali yaseMazantsi eCerney ebonelela ngezinto ezininzi, kubandakanya ivenkile yasekhaya, abalungisi beenwele, bathathe kunye nokhetho lwee-pubs. Isis kunye Windrush Lake kwakhona kuphela 15 imizuzu drive ukusuka Cirencester kunye nesiseko ebalaseleyo ukuhlola Cotswolds.
Iofisi ivulwa ngentsimbi yesi-9 kusasa ukuya ngo-5.30 malanga. Iifowuni zijongwa ngaphandle kweeyure zeofisi kwimeko kaxakeka.